9 Zvino zvaakanga achipfuura akaona munhu akanga ari bofu kubvira pakuberekwa. 2 Vadzidzi vake vakamubvunza kuti: “Rabhi,+ ndiani akatadza,+ munhu uyu kana vabereki vake,+ zvokuti akaberekwa ari bofu?” 3 Jesu akapindura kuti: “Munhu uyu haasi iye akatadza kana kuti vabereki vake, asi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aratidzwe pachena paari.+ 4 Tinofanira kuita mabasa aiye akandituma achiri masikati;+ usiku+ huri kuuya pasina munhu anozogona kuita basa. 5 Chero bedzi ndiri munyika, ndiri chiedza chenyika.”+ 6 Pashure pokutaura zvinhu izvi, akapfira mate pasi, akakanya ivhu nemate, akaisa ivhu rake pamaziso omunhu wacho,+ 7 akati kwaari: “Enda ugeze+ mudziva reSiroami”+ (zvinoshandurwa kuti ‘Kutumwa’). Nokudaro iye akaenda, akageza,+ akadzoka ava kuona.+ 8 Naizvozvo vavakidzani nevaya vaichimboona kuti aiva mupemhi vakatanga kuti: “Uyu haasi iye munhu aigara pasi achipemha here?”+ 9 Vamwe vaiti: “Ndiye.” Vamwe vachiti: “Kana, asi akafanana naye.” Munhu wacho aiti: “Ndini.” 10 Naizvozvo vakatanga kuti kwaari: “Saka maziso ako asvinudzwa sei?”+ 11 Iye akapindura kuti: “Munhu anonzi Jesu akanya ivhu, akarinamira pamaziso angu, akati kwandiri, ‘Enda kuSiroami+ ugeze.’ Naizvozvo ndaenda, ndikageza, ndikaona.” 12 Ivo vakati kwaari: “Munhu iyeye ari kupi?” Iye akati: “Handizivi.” 13 Vakaenda nomunhu iyeye aimbova bofu kuvaFarisi. 14 Sezvineiwo rakanga riri Sabata+ pazuva iro Jesu akakanya ivhu, akasvinudza maziso ake.+ 15 Naizvozvo, panguva ino, vaFarisi vakatangawo kumubvunza kuti akaona sei.+ Iye akati kwavari: “Aisa ivhu pamaziso angu, uye ndageza ndikaona.” 16 Naizvozvo vamwe vevaFarisi vakatanga kuti: “Uyu haasi munhu anobva kuna Mwari, nokuti haachengeti Sabata.”+ Vamwe vakatanga kuti: “Munhu mutadzi angagona sei kuita zviratidzo+ zvorudzi irworwo?” Naizvozvo pakava nokupesana+ pakati pavo. 17 Nokudaro vakatizve kubofu riya: “Unotii pamusoro pake, zvaasvinudza maziso ako?” Munhu wacho akati: “Iye muprofita.”+ 18 Zvisinei, vaJudha havana kutenda kuti aimbova bofu uye kuti akanga ava kuona, kusvikira vashevedza vabereki vomunhu akanga ava kuona. 19 Vakavabvunza kuti: “Uyu ndiye mwanakomana wenyu wamunoti akaberekwa ari bofu here? Saka iye zvino ava kuona sei?” 20 Vachipindura, vabereki vake vakabva vati: “Tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu uye kuti akaberekwa ari bofu. 21 Asi kuti zvino ava kuona sei hatizivi, kana kuti ndiani amusvinudza hatizivi. Mubvunzei. Iye akura. Anofanira kuzvitaurira.” 22 Vabereki vake vakataura zvinhu izvi nokuti vakanga vachitya+ vaJudha, nokuti vaJudha vakanga vatobvumirana kuti, kana munhu akamupupurira pachena kuti ndiye Kristu, anofanira kudzingwa musinagogi.+ 23 Ndokusaka vabereki vake vakati: “Iye akura. Mubvunzei.” 24 Naizvozvo vakashevedza kechipiri munhu aimbova bofu, vakatanga kuti kwaari: “Kudza Mwari;+ tinoziva kuti munhu uyu mutadzi.” 25 Iye akapindurawo kuti: “Kana ari mutadzi ini handizivi. Ndinoziva chinhu chimwe chete, kuti, kunyange ndanga ndiri bofu, panguva ino ndava kuona.” 26 Naizvozvo vakati kwaari: “Aitei kwauri? Asvinudza sei maziso ako?” 27 Iye akavapindura kuti: “Ndatokuudzai, asi hamuna kuteerera. Munodirei kuzvinzwa zvakare? Munodawo kuva vadzidzi vake here?” 28 Vakamutuka, vakati: “Iwe ndiwe mudzidzi womunhu iyeye, asi isu tiri vadzidzi vaMosesi. 29 Tinoziva kuti Mwari akataura naMosesi;+ asi kana ari munhu uyu, hatizivi kwaanobva.”+ 30 Achipindura, munhu wacho akati kwavari: “Chokwadi ichi chishamiso,+ kuti hamuzivi kwaanobva, asi iye asvinudza maziso angu. 31 Tinoziva kuti Mwari haateereri vatadzi,+ asi kana munhu achitya Mwari uye achiita zvaanoda, anoteerera iyeyu.+ 32 Kubvira kare hazvina kumbonzwika kuti munhu akasvinudza maziso omunhu akaberekwa ari bofu. 33 Kudai munhu uyu aisabva kuna Mwari,+ hapana chinhu chaaimbogona kuita.” 34 Vachipindura, ivo vakati: “Iwe sezvauri wakaberekerwa muzvivi,+ asi zvino wava kutidzidzisa here?” Vakabva vamudzingira kunze!+ 35 Jesu akanzwa kuti vakanga vamudzingira kunze, uye, paakamuwana, akati: “Uri kutenda muMwanakomana+ womunhu here?” 36 Munhu wacho akapindura kuti: “Changamire, iye ndiani kuti nditende maari?” 37 Jesu akati kwaari: “Wamuona uye, kunze kwezvo, ari kutaura newe ndiye iye.”+ 38 Iye akabva ati: “Ndinotenda maari, Ishe.” Uye akamupfugamira.+ 39 Jesu akati: “Ndakauya munyika ino nokuda kwokutonga+ uku: kuti vaya vasingaoni vaone+ uye vaya vanoona vave mapofu.”+ 40 Vaya vevaFarisi vakanga vainaye vakanzwa zvinhu izvi, vakati kwaari: “Tiri mapofuwo+ here?” 41 Jesu akati kwavari: “Kudai maiva mapofu, mungadai musina chivi. Asi zvino munoti, ‘Tinoona.’+ Chivi chenyu+ chinoramba chiripo.”